Hamro Online NewsNepal's Leading News Portal | अचम्म ! सिन्धुपाल्चोकमा गोरुले दूध दिएपछि हेर्न जानेको भिड, हेर्नुहोस भिडियो सहित - Hamro Online News
अचम्म ! सिन्धुपाल्चोकमा गोरुले दूध दिएपछि हेर्न जानेको भिड, हेर्नुहोस भिडियो सहित
शुक्रबार, भदौ १५, २०७५ | onlinenews
सिन्धुपाल्चोक– सुनिन्थ्यो ‘भाग्य बलियो भयो भने गोरु पनि ब्याउँछ रे । गोरु ब्याएको त देखिएको छैन, तर सिन्धुलीपाल्चोकमा कृषकले पालेको गोरुले दूध दिएको छ । हेलम्बु गाँउपालिका वडा नम्बर –६, इचोकको पुरानागाँउका सोनाम तामाङले घरमा पालेको गोरुले दैनिक दूध दिँदै आएको छ ।
तामाङको गोरुले बिहान बेलुका गरि दैनिक एक मानाभन्दा बढी दूध दिंदै आएकोे छ । हेर्न जाने गाउँलेहरु गोेरुको दूध प्रसाद भनेर खाइरहेका छन् । यो भन्दा अगाडि कहिँ कतै नदेखेको र नसुनेको यो घटनाले सबैलाई चकित बनाएको छ । तर गोरुधनी तामाङ भने गोरुले दूध दिएकोमा दङ्ग छन् । अहिले तामाङको घरमा गोरुले दूध दिएको हेर्न आउने मानिसहरुको भिडभाड नै लाग्ने गरेको छ ।
तामाङका अनुसार गएको जेठ महिनाबाट गोरुको अण्डकोश छेउमा रहेका थुनहरु बढेको थियो । गोरुको थुन बढेको केही समयपछि दूधको थोपा खसेको थियो । त्यसपछि तामाङले दूध हो कि भनेर परीक्षण गरेपछि चारमध्ये २ वटा थुनहरुमा दूध आउने गरेको छ । तामाङका अनुसार अहिने हेर्न आउने सबैले शिवजीको वाहन भनेर पूजा गर्ने गरेका छन् ।
गोरुको दूध अन्य गाईको भन्दा फरक छैन् । रातो र कालो रङ्ग मिसिएको गोरु एक वर्षअघि तामाङ परिवारले किनेर ल्याएको हो । गोरुले चमत्कार नै गरेको तामाङ परिवारको भनाई छ । गोरुको दूध हेर्न पुगेका गाँउपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले पनि गोरुले सबैलाई चकित बनाएको बताए ।
हर्मोन गडबढका कारण गोरुको दूध आएको हुनसक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । हर्मोनको कारण यस्तो हुनसक्ने भए पनि ठ्याक्कै यही नै हो भन्ने स्थिति नभएको हेलम्बु पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख टोपबहादुर बरालको भनाई छ ।
गोरुले दूध दिनु विज्ञानसम्वत नभएको वरिष्ठ चिकित्सकहरु बताउँछन् । यस्तो घटना हालसम्म थाहा नभएको र गोरुले दूध दिनु अनुसन्धानको विषय बनेको चिकित्सकहरुको भनाई छ । यसको बारेमा विस्तृत रुपमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेपछि मात्र यही हो भन्न सकिने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
आचम्माको कुर विडियो सहित हेर्नुस् ।हाम्रो हेलाम्बु ग.वि.स वड न.६ मा वर्षोै देखी घर भएको गोले तमाङ्ले लगभग २ वर्षा आगडि देखी पाली रहेको गोरूले दुध दिधाँ उनि त्रसित आवस्थमा छन के यो राम्रो होला र प्लिज सबैले शेयर गारी दिनु होला 💔